Distance Learning (Somali) - Rocori School District
Qorshaha Barashada ROCORI 2020
Laga bilaabo Maarso 30th, 2020 ardayda Dugsiga ROCORI waxay heli doonaan tilmaam maalinle ah illaa Abriil 30th iyagoo adeegsanaya Model Learning Distoorkeena ah.
Waa maxay barashada masaafada?
Waxka barashada masaafada waxaa ku jira casharo qorsheysan oo ku saabsan khadka tooska ah ama macalin loo diyaariyay ardayda oo dhammeeya markay ka maqnaanayaan dhismaha iskuulka jir dhiska. Tacliintu way sii socon kartaa xitaa marka ardayda iyo macallimiintu aysan isla joogin. Iyada oo la xoojinayo qiimaha barashada, iyadoo la istcimaalayo Barashada Fogaanta waxay dhiirigelisaa koritaanka dabeecadaha ee isku filnaashaha, laqabsashada, iyo adkeysi.
Waa maxay himilooyinka waxbarashada barashada masaafada?
Si loo naaquso carqaladeynta horumarka waxbarasho ee ay sababaan xiritaanka qorsheysan iyo waqtiga iskuulka oo la dheereeyo iyadoo laga dhigayo maalmaha iskuulka ka baxsan inay noqdaan kuwa wax soo saar leh oo wax ku ool ah.
Si loogu oggolaado ardayda fursad ay ku tababaraan nooca barashada khadka tooska ah ee qayb ka mid ah sii kordheysa ee labadaba daraasadda kulliyadda iyo tababarka goobta shaqada.
XIRFADAHA BARBARKA ROCORI
Hoos waxaad ka akhrisan doontaa faahfaahin gaar ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan oo la xiriira qorshahan. Fadlan sidoo kale tixraac jadwalka lagu taliyay ee lagu dhajiyay COVID 19 qeyb ka mid ah shabakada degmada ROCORI.
JADWALKA LA SAMEEYAY
Hoos waxaa ku yaal jadwalka lagu taliyay in qoysaska ay isticmaalaan si ay u qorsheeyaan maalinta masaafada ee ardaygaaga laga bilaabo Maarso 30, 2020. Jadwalka lagu taliyay waa in adiga iyo annaga ah barayaal ahaan aan hubinno inaan ku sharfanno qoysaska leh caruur fara badan oo hal qalab ku isticmaalaya gurigooda. Waxaan kaloo ognahay in inta lagu guda jiro waqtigan, qoysasku ay yeelan doonaan qaban-qaabooyin kaladuwan una baahan dabacsanaan. Emailku wuxuu noqon doonaa xidhiidhka koowaad ee ka dhexeeya qoysaska iyo macallimiinta. Emayllada la soo diray ka dib 3:30 pm dib looma soo celin karo ilaa subaxda dambe.
7:30 AM - 8:15 AM Macallimiinta La-Hubinta Waalidka
8:15 AM - 11:00 AM EC / PK / K-5 Waqtiga Aqoonta
Dugsiga sare ee takhasuska leh waqtiga / ku celcelinta / aqrinta / qoraalka shaqo / mashruuc
11:00 AM - 12:00 PM Furitaanka
12:00 PM - 3:00 PM Waqtiga Tacliinta Sare
Waqtiga takhasuska leh ee ardayda EC / PK / K-5 iyo ciyaar / akhris / shaqo qoraal / mashruuc
3: 00-3: 30 PM Macallimiinta La-Hubinta Waalidka
Carruurnimada Hore (ECFE / Preschool)
Wada shaqeynta, qorshayaasha waxaa loo diri doonaa warside Smore oo laga helo tabta COVID-19 Tab. Joornaalka waxaa email loogu soo diri doonaa Isku-duwaha Carruurnimada Hore inta ay tahay 9-ka subaxnimo Isniinta kasta. Dhamaan macallimiinta dugsiga barbaarinta ayaa diyaar u ah inay taageeraan qoysaska Isniinta-Jimcaha 10:00 subaxnimo ilaa 2:00 galabnimo. Macaliminteena Waalidka waxaa la heli karaa Isniinta 10:00 subaxnimo ilaa 2da galabnimo iyo Arbacada 10:00 subaxnimo ilaa 1:00 galabnimo.
Macallimiintu waxay la xiriiri doonaan qoysaska shaqsiyaadka si ay u bixiyaan wadahadal iyo tababar ku saabsan koritaanka ilmahooda.
Macallinkayaga Waalidka ah wuxuu ku bixiyaa booqashooyinka Guryaha taleefanka ama wada sheekaysiga fiidiyaha. Booqashada guriga waxaa lagu jadwaleeyn karaa iyadoo emaylka loo diro baraha waalidka. Waad ula xiriiri kartaa barbaarinta waalidka adigoo email ugu soo diraya Jill Blomdahl-Skanson at skansonj@rocori.k12.mn.us .
Macalin kastaa wuxuu bixin doonaa qorshooyinka barashada masaafada isagoo adeegsanaya warsidaha 'Smore' oo laga helo tabta COVID-19 ee barta internetka degmada. https://www.rocori.k12.mn.us/b385426a-a015-47bb-a428-c60b5bfd37fa/covid-19-information Casharada waxaa lagu cusboonaysiin doonaa 8:15 subaxnimo maalin kasta iyadoo ay macallimiintu diyaar u yihiin inay kaga jawaabaan su'aalaha emaylka illaa maalinta oo dhan illaa 3:00 pm. Xiriirinta qorshayaasha casharka waxaa laga heli karaa websaydhka degmada.
Ardayda waxaa looga baahan yahay inay macalinkooda ka hubiyaan isku xirka ka qebgalka qorshaha casharka Smore maalin kasta 3:00 pm. Waxaa la fahamsan yahay in ardaydu ay ku yeelan karaan mas'uuliyado fara badan oo kala duwan oo guriga ah inta lagu jiro Maalmaha Barashada Foga. Xubnaha shaqaalaha way fahmaan tan waxayna la qabsan doonaan xaaladahaas. Si kastaba ha noqotee, filashooyinka ayaa ah in ardaydu ay ku dhammaystiraan shaqada si ku-meel-gaadh ah sida loo soosaaray ardayga iyo macallinka.
Macalin walbaa wuxuu bixin doonaa barashada masaafada ah barnaamijka kombuyuutarka ee degmada ee KOOXAHA. Tani waa codsi Microsoft oo ay ardaydu ka heli doonaan bogga ROCORI. https://www.rocori.k12.mn.us/b385426a-a015-47bb-a428-c60b5bfd37fa/covid-19-information Casharada waxaa lagu dhejin doonaa 9:00 am oo macallimiinta la heli karo si looga jawaabo su'aalaha emaylka illaa maalinta oo dhan illaa 3:00 pm. Waxaa la fahamsan yahay in ardaydu ay ku yeelan karaan mas'uuliyado fara badan oo kala duwan oo guriga ah inta lagu jiro Maalmaha Barashada Foga. Xubnaha shaqaalaha way fahmaan tan waxayna la qabsan doonaan xaaladahaas. Si kastaba ha noqotee, filashooyinka ayaa ah in ardaydu ay ku dhammaystiraan shaqada si ku-meel-gaadh ah sida loo soosaaray ardayga iyo macallinka.
Xarunta Waxbarashada Beddelka ah
Barashada masaafada waxay ku lug leedahay casharo la qorsheeyay oo macalinku ardaydu ku dhammaystiri doonaan dhismaha ALC. Qalabka wax lagu barto waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn fiidiyowga, Kooxaha Microsoft, Edgenuity iyo inbadan.
Qoysasku waxay u adeegsan doonaan iskuxirka kaqeybgalka xaashiyaha macalin kasta ee Smore warside. Isku xirka waa inuu buuxiyaa magaca cunugga ugu dambeyn 3:00 pm maalin kasta. Macallimiintu waxay lahaan doonaan 3:00 pm illaa saqda dhexe si ay ugu gudbiyaan xaadirinta Skyward. Haddii ardaygu buko oo aanu dhammaysan karin casharrada maalinta, qoysku waa inay la xiriiraan macallinka qolka jiifka. Arday kasta oo maqnaanshaha la xidhiidha astaamaha COVID-19 looma xisaabin doono maqnaanshaha.
Ardayda ayaa lagu tirin doonaa inay joogaan iyagoo galaya koontada kooxdooda maalin walba. Qoysasku waxay u baahan doonaan inay soo wacaan khadka ka-qaybgalka dugsiga markasta oo ilmahoodu uusan awoodin inuu kaqaybqaato barashada masaafada ah maalin kasta oo la xiriirta jirro ama haddii kale. Arday kasta oo maqnaanshaha la xidhiidha astaamaha COVID-19 looma xisaabin doono maqnaanshaha.
Sida loogu baahan yahay cutubka 125A, waxaa lahaan doona meeleyn loogu talagalay in lagu haqabtiro baahiyaha qorshaha IEP / 504.
Daneeyayaasha muhiimka ah (maamulaha kayska, waalidka, macalinka iyo ardayga) ayaa iska kaashan doona in la abuuro ama wax laga badalo IEP.
Inta lagu jiro Barashada Fogaanta, macalinka fasalka ayaa noqon doona kheyraadka ugu weyn ee laga caawiyo shaqooyinka iyo casharrada. Haddii cunugga caadiyan ka baxo fasalka oo u aado macallin kale xagga xisaabta, akhriska, ama maadooyin kale, markaa macallinkaas waa inuu qaabeeyaa meelaynta khadka tooska ah ee aaggaas.
Marka qorshaha barashada masaafada uusan si buuxda u maran karin maalin-dugsiyeedka-fasalka, dadaallada ayaa la sameyn doonaa si loo bixiyo taageerada ay u baahan yihiin ardayda gaar ah. Tusaale ahaan, haddii aqrintu ay caqabad ku tahay ardayga oo ardaygu uu marin u helo internetka, macallinku wuxuu ku meelayn karaa howlaha deg degga u akhrin doona qoraalka kore.
Dhammaan shaqooyinka waxaa lagu dhejin doonaa 8:15 am oo macallimiinta diyaar u ah inay kaga jawaabaan su'aalaha emaylka maalinta oo dhan illaa 3:00 pm.
Ardayda u baahan caawinta qalabka meeleynta internetka waa inay la xiriiraan macallinkooda. Ardayda ama qoysaska u baahan caawimaada aaladaha waa inay kula xiriiraan taageerada farsamada e-mayl ahaan at techsupport@rocori.k12.mn.us ama wac 320-685-4185.
Taageerada Adeegyada Tacliinta iyo Bartilmaameedka
Skuulada ROCORI waxay sii wadi doonaan inay bixiyaan ADSIS, adeegyada cinwaanka iyo Guul tacliimeed inta lagu jiro barashada fog si loo taageero ardayda oo dhan.
Ardayda u qalanta barashada Barteyaalka Af Ingiriisiga waxay sii wadi doonaan inay ka helaan barashada luqadda macallimiinta EL. Eeg ROCORI Distance Learning LIEP Qorshaha Lifaaqa.
Taageero Bulsho iyo Dareenka
Taageerada shucuurta bulshada ayaa sii wadi doonta inay u diyaar ahaato ardayda iyo qoysaska. La-taliyayaasha K-5 iyo shaqaalaha bulshada ayaa ku siin doona taageero Smore. 6-12 la taliyayaal ayaa taageero ka heli doona Kooxaha. Haddii loo baahdo kaalmo dheeri ah la-taliyaha dugsiga xog la xiriir waxaa laga heli karaa barta internetka ee degmada ROCORI.
Qoysaska u baahan caawimaad xagga luqadda ah waxay la xiriiri karaan Xiriiriyaha Dhaqamada-kala-duwan ee ROCORI. Macluumaadka Xiriirka: Patricia Ayala 320-282-6604
Fadlan la xiriir dhismaha iskuulka ardaygaaga wixii ku saabsan su'aalaha kale oo dhan adoo wacaya:
Xarunta waxbarashada degmada: 320-685-8631
John Clark Elementary: 320-251-8651 dheere. 3
Dugsiga Hoose ee Richmond: 320-597-2016
Dugsiga Hoose ee Qaboobaha: 320-685-4951
Dugsiga Dhexe ee ROCORI: 320-685-4969
Dugsiga Sare ee ROCORI: 320-685-4911
Hawlaha ROCORI: 320-685-4913
Waalidku waa inay raacaan qorshooyinka barashada masaafada ee ay wadaagaan iskuulada dadweynaha ROCORI. Haddii loo baahdo diyaarin gaar ah oo loogu talagalay ardayda fadlan si toos ah ula shaqee macalinka. Qoysaska waxaa la weydiin doonaa inay degmada ogeysiiyaan sahaminta alaabada ee ay dirtay degmadu hadii ay leeyihiin marin u hel internet ama baahi qalab. Xafiiska 365, Kooxaha iyo SMORE ayaa looga baahan yahay dhammaystirka meeleynta caadiga ah ee ardayga ayaa u baahan doona marin u helitaanka internetka ee ardayga.
Waaliddiinta, oo ay weheliyaan macallimiinta iyo ardayda, waxaa laga codsanayaa inay xasuustaan in maalmaha barashada masaafada ah loogu talagalay inay noqdaan dabacsanaan: haddii cunuggu ku dhibtoodo fikradda ama meeleynta oo uusan awoodin inuu dhammaystiro shaqada maalintaas, waalidiinta waa inay xasuusiyaan ardaygooda inay la xiriiraan macallin ku saabsan sida loo buuxiyo shuruudaha.
Waalidiintu waa inay si toos ah ula xiriiraan macallimiinta wixii su'aalo ah, walaac ama jahwareer ah ee ay ka qabi karaan ku saabsan meelaynta barashada Distance
Diyaarinta Maalmaha Barashada ee Fogaanta, barayaasha fasalada PreK-12 ayaa laga codsaday:
Ku bartaan ardayda dhigta Xafiisyada 365 (6-12) iyo Smore (PreK-5) si ay markaa u awoodaan inay u galaan oo ay u dhammaystiraan shaqo kasta oo internetka ah.
Bixi qorshe waqti go'an, dhajinta shaqada maalinta illaa 8:15 am.
Qorsheyso is-hagitaan, waxbarasho madax-bannaan oo tixgelin gaar ah leh da'da iyo baahiyaha waxbarasho ee shaqsiyeed.
Filo waxyaabaha waqtiga looga baahan yahay aqoonsashada ardayda inay wax ku bartaan meelo kala duwan, gaar ahaan goob madax banaan.
U habayn fursadaha waxbarasho adoo diirada saaraya taageerida dhibaato-gelinta ardayda leh caqabadaha dhijitaalka ah.
La xiriir asxaabtaada si aad u xaqiijiso waxyaabaha laga filayo, isgaarsiinta iyo borotokoolka.
Inta lagu gudajiro saacadaha qandaraaska Maalmaha Barashada Fog, dhammaan macallimiinta waxaa laga codsaday:
Hubi Xafiiska 365 Kooxo iyo / ama emayl inta lagu jiro Maalmaha Kala Duwan ee laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 3:30 pm.
Waqtiga Horumarinta Xirfadeed sidoo kale waa in loo adeegsadaa si loo sii wado yoolalka horumarka shaqaalaha.